मधेशको समस्या समाधान नभएसम्म सविधान कार्यान्वयन हुँदैन | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » मधेशको समस्या समाधान नभएसम्म सविधान कार्यान्वयन हुँदैन
मधेशको समस्या समाधान नभएसम्म सविधान कार्यान्वयन हुँदैन
केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद, नेकपा (माओवादी) केन्द्र
लालेन्द्रकुमार मण्डल नेकपा (माओवादी) केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् र दुई नम्बर प्रदेशको वाइसीएल ब्यूरो इन्चार्ज पनि । महोत्तरी जिल्लाको सहसौल निवासी मण्डल वाइसीएलको गाउँ इकाइ कमिटीबाट राजनीतिक शुरु गर्दै सो संगठनको केन्द्रीय सचिवसम्म पनि पुग्नुभयो । ३६ वर्षीय मण्डल पार्टीको समानुपातिक सांसद पनि हुनुहुन्छ । जनयुद्धकालदेखि नै पार्टीमा लाग्नु भएका युवा नेता मण्डलसँग सहारा टाइम्सका लागि गरिएको कुराकानी मुख्य अंशः
विभिन्न पार्टीहरुको एकीकरण भएर माओवादी केन्द्र बनेको छ, अब कसरी चलिरहेका छन् पार्टी ?
–माओवादीबाट नै फुटेर अलग अलग रहेका दलहरु अहिले एकीकरणमा आएका छन् । त्यो एकीकरणले सबैमा आशाको किरण र विश्वासको वतावरण सृजना गरेको छ । राष्ट्रिय मुक्तिको लागि माओवादी केन्द्र बनेको हो । उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायलाई मुक्ति दिलाउनका माओवादी केन्द्रले नै लड्न सक्छ भने कुरा आमजनतामा परिसकेको छ । केन्द्र र राज्यस्तरमा एकता भएको छ । कतिपय जबस मोर्चाहरुको बीच पनि एकीकरण भइसकेको छ कतिमा बाँकी छ । जिल्लास्तरमा पनि कतिपय ठाउँमा एकीकरण गर्न बाँकी छ । त्यसैले सबै ठाउँमा एकीकरण भइसकेपछि मात्र पार्टी अगाडि बढेको देखिन्छ ।
के कारणले माओवादी विभाजित भएको थियो अहिले आएर पुनः किन एकीकरण भयो ?
–एउटा विचारबाट पार्टी निर्माण भएपनि त्यहाँ विभिन्न विचारका व्यक्तिहरु हुन्छन् । कहिले काही एक अर्कासँग कुरा नमिल्न पनि सक्छ र पार्टी विभाजन हुन्छ । हुनसक्छ, त्यतिबेला सबैको विचारलाई नसमेटेको कारणले विभाजन भएको थियो । सायद अहिले आएर पार्टी नेतृत्वले यो कुराको रिलाइज गरेको कारण एकीकरण भएको हुनसक्छ । शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम, सत्य निरुपन तथा मेलमिलापका कार्य ओझेलमा परेको कारणले पनि सबै माओवादीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएको हुनुपर्छ ।
एकीकरणपछि त पार्टी झन गन्जागोल भएको भनिन्छ नि ?
–यो त स्वभाविक कुरा हो नि । हरेक पार्टीको संरचना आआफ्नै हुन्छ । ती पार्टीहरु एकीकरणमाअ आएपछि गन्जागोल हुनु स्वभाविक हो र घरघरबाट निस्केर एकै ठाउँमा भेल भएपछि त्यहाँको उपस्थिति कस्तो गन्जागोल देखिएको हुन्छ । तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेपछि त्यही नै सुन्दर देखिन थाल्छ । त्यस्तै भएको छ अहिले । विभिन्न ठाउँमा रहेका दलहरु एक ठाउँमा आएको छ, त्यसैले अव्यवस्थित देखिएका पक्कै हो । महाधिवेशनबाट त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम हुन्छ । र हेर्नु होला, अगामी दिनमा देशकै ठूलो पार्टी, त्यसमा पनि एक नम्बरको पार्टी बन्छ ।
पार्टी एकीकरणपछि असन्तुष्टिहरु देखिएको छ त्यस्तो अवस्थामा एक नम्बरको पार्टी बन्छ भनि कसरी भन्नुहुन्छ ?
–कहिलेकाही कस्तो हुन्छ भने भद्रगोलमा पनि गोलकिपरहरुले गोल छिराउने गर्छ । यो कुरा बुझ्नुस पार्टी निर्माणको प्रकृयामा छ । एकीकरणपछि पार्टीभित्र एउटा उत्साह थपिएका छ । त्यहाँ विभिन्न विचारहरु आइरहेका छन्, त्यसले गर्दा केही असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिएका छन् तर केही दिनमै एकताको महाधिवेशन आउँदैछ त्यसबाट सबै समाधान हुन्छ ।
अहिलेदेखि त्यसलाई मिलाउन सकिएन भने एकैचोटी महाधिवेशनमा गएर कसरी मिलाउन सकिन्छ, गुट, उपगुटहरु रही रहन्छन् नि त ?
–तपाईले भनेको गुटहरु सबै दल तथा संगठनमा छन् । काँग्रेस र एमालेमा पनि हेर्नुस् न त्यहाँ गुटहरु प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । एमालेमा माधव कुमार गुट, झलनाथ खनाल गुट, वामेव गौतम गुटहरु छन् । त्यस्तै काँग्रेसमा पनि रामचन्द्र गुट, देउवा गुट, सिटौला गुट, प्रकाशमान सिह गुटहरु छन् तैपनि पार्टी चलेको छ । त्यस्तै हाम्रो पार्टीमा विभिन्न असन्तुष्टिका कारण गुटहरु छन् । त्यसका लागि पार्टीभित्र संघर्षहरु भइराखेका होला । र यो स्वभाविक पनि हो । बहस र मन्थनका लागि गुटहरु, विभिन्न विचार समूहहरु चाहिन्छ तर राष्ट्र र समाजको हकमा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
खाइपाइ आएको कुरा मान्छेले हतपत छाड्न सक्दैन, जो मान्छे अहिले पोलिटब्यूरो सदस्य भएका छन्, कार्यालय सदस्य भएका छन्, केन्द्रीय सदस्य भएका छन् भोली गएर महाधिवेशनमा सधारण सदस्यमा झार दिनुभयो भने के त्यो मान्न सक्छ त ?
–पार्टी त विधि र पद्यतीले चल्ने हो । कसैले म पार्टीको विधि र पद्धति नै मान्दिन भन्यो भने त्यसलाई केही गर्न सकिदैन । यदि विधि र पद्धति मान्यो भने कसैलाई कुनै समस्या हुने छैन । राष्ट्रिय महाधिवेशनले एउटा निकास दिइसकेपछि त्यसलाई सबैले स्वीकार गरि दिनुपर्ने सबैको कर्तव्य बन्न जान्छ । वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला, क्षेत्र हुँदै केन्द्रसम्म आउने हो । त्यही ठाउँबाट व्यवस्थित गर्दै आयो भने माथिसम्म आफै व्यवस्थित हुँदै जान्छ र कसैले चित्त पनि दुखाउँदैन । वेस्त मिनिस्टर प्रणाली र संसदीय व्यवस्थालाई हामीले मानेर आएका छौं । त्यसले महाधिवेशनमा सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सकिन्छ ।
पार्टी एकीकरणपछि तपाई केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो, भोली गएर तपाईलाई केन्द्रीय सदस्यबाट झारेर जिल्ला सदस्यमा राख दियो भने के तपाई स्वीकार गर्नुहुन्छ त ?
–मैले अघि नै भने कि कुनै पनि पार्टी विधि र प्रकृयाबाट चल्ने हो । यदि म पार्टीको सच्चा सिपाही वा कार्यकर्ता हो भने मैले ती विधि र प्रकृयालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर नियत र दिशा स्पष्ट हुनुपर्छ । गाउँस्तरबाट चुनिएर आउने क्रममा मलाई त्यही गाउँका कार्यकर्ताले पत्याएन वा मलाई मत दिएन भने म कसरी माथि आउँछु । त्यो परिणामलाई त मैले स्वीकार गर्नुपर्छ । हिजो म केन्द्रीय सदस्य थिए, आज किन हुन पाउँदिन भनि तर्क गर्नु बेकार हुन्छ ।
यो एकीकरणले अरु ठाउँ भन्दा बढी मधेशमा असन्तुष्टि देखाएको छ, मधेशमा किन यस्तो असन्तुष्टि बढ्यो त ?
–तपाईले भने जस्तो असन्तुष्टि छैन मधेशमा तर एकीकरणपछि केही कुराहरु देखिएको र सुनिएको अवश्य हो । जनयुद्धको क्रममा सँगै काम गरेको । पार्टीमा निकै जुनियर भएर काम गरेको तर अहिले एकीकरण हुँदा ती कार्यकर्ता तथा नेताहरु एकाएक माथि आउनुले केही साथीहरुमा असन्तुष्टि देखिएको स्वभाविक नै हो तर त्यसलाई महाधिवेशनले मिलाउँछ ।
त्यसरी जुनियरहरु सिनियर बनेका को को हुन् ?
–अहिले कसैको नाम यहाँ न लिउ । तपाईहरुलाई सबै थाह छ ।
एकीकरण भएपछिका पार्टीहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय समिति यस्तो जम्बो बनाउनु भएको हो भनि चर्चाहरु भइरहेका छन् नि ?
–म भन्छु यो समय सापेक्ष कार्यसमिति बनेको हो । यस्तो बनाउनु परस्थितिको माग थियो र बन्यो । यसमा कुनै नराम्रो भएको छैन । सबै पार्टीका आआफ्नो संरचना थियो । ती सबै लिएर पार्टीमा आएका छन् ती सबैलाई मिलाउनका लागि यस्तो भएको हो । प्रचण्ड चाहेर वा नचाहेर यस्तो भएको होइन । यो समयको माग अनुसार त्यस्तो भएको हो । मानुस् अहिले कुनै पार्टी र हाम्रो पार्टीबीच एकीकरण भयो भने त्यहाँ रहेका पदाधिकारी र नेताहरुलाई कार्यसमितिमा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन । त्यसरी ल्याए भने पक्कैपनि केन्द्रीय समितिमा सँख्या वृद्धि हुन्छ । त्यसलाई जम्बो भन्ने कि समयको माग हो भन्ने ? त्यसैले प्रचण्डले यस्तो गर्यो भन्दा पनि परस्थितिले यस्तो गरायो तर सधै यस्तो रहँदैन ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न नसकेका कारणले यस्तो भएको हो, त्यसो भए प्रचण्ड असफल नेता हो भन्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
–त्यसरी मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । अलग अलग रहेका पार्टीलाई मिलाउनु प्रचण्डको सफलता हो । अहिलेसम्म सबैलाई चित्त बुझाएर राख्नु भएको छ त्यो पनि उहाँको सफलता नै हो तर कार्यसमिति जम्बो बन्नुमा परिस्थिति दोषी हो प्रचण्डको कुनै दोष छैन । उहाँ असफल हुनु हुन्न ।
प्रसगं बदलौ, नयाँ सरकारका लागि पार्टीले धेरै पहिलादेखि पहल गर्दै आएका छन् अब तपाईहरुको पार्टीले सरकारको नेतृत्व कहिले गर्छन् त ?
–राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको छ । र, त्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गर्ने दावी छ । तर, त्यसअघि हाम्रो पार्टी र एमालेबीच भएको नौ बुँदे सहमति लगायत अन्य अलिखित सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यो भएन भने राजनीतिक बेइमानी हुन्छ । बजेट आइसकेपछि तुरुन्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा थियो तर एमालेले गरेको सहमतिबाट पछाडी हट्न लागेको कारण यो अवस्था सृजना भएको हो । हामी सरकारमा छौ भने कुराको अनुभूति नै भइरहेका छैन । संयुक्त सरकार हो भने त्यसका जस अपसज सबै हामीले पनि पाउनुपर्छ तर त्यस्तो छैन । एमाले आफ्नो ढंगबाट अगाडि बढी रहेका छन् । त्यसमा हाम्रो विमति छ । हाम्रो सरकार हो भने अनुभूति एमालेले दिलाउनु पर्यो भनि हाम्रो प्रेसर हो ।
यदि तपाईहरुको प्रेसरले काम गर्यो भने सरकार परिवर्तन हुँदैन ?
–एमालेसँग भएको नौ बुँदे माग कार्यान्वयन होस् । सरकारको परिवर्तनको कुनै आवश्यकता छैन । तर हामी सरकारमा छौ तर हाम्रो कुनै कामै भइरहेका छैन भने त्यस्तो सरकारका लागि काँध थापि रहनुको पनि आवश्यकता छैन ।
नौ बुँदे माग पूरा गराउनका लागि तपाईको पार्टीले ओलीलाई कति दिनसम्म पर्खिने त ?
–हाम्रो पार्टी र एमालेबीच छलफल चलिरहेको छ । समाधान चाँडै होस् भनि चाहेका छौ हेरौं के हुन्छ । हामीले ओलीका लागि पर्खेका छैनौ । छलफल जारी छ । छलफलबाट जे निष्कर्ष निस्किन्छ त्यो कार्यान्वनयन हुन्छ ।
महोत्तरी जस्तो ठाउँबाट तपाईले राजनीतिक गर्नुहुन्छ, मधेश आन्दोनलले तपाईको राजनीतिकलाई कतिको प्रभाव पारेको छ ?
–मेरो राजनीतिकलाई मात्र होइन सिगों देशलाई नै प्रभावित पारेको छ । एउटा कुनै खास व्यक्तिलाई प्रभाव पारेको छैन । खासमा भन्ने हो भने त्यो मधेश आन्दोलनलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ । त्यसका कतिपयमा मागहरु जायज छन् जुन हामीले नै उठाउँदै आएका हौं । कतिपय मागहरु जायज छन् जसका लागि गम्भीर छलफलको आवश्यकता छ । मधेशीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भने कुरा आफूहरुले सरकारदेखि सदनसम्म उठाएका छौ । मधेशलाई सम्बोधन नगरिकन सविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो कुरा हामीले भन्दै आएका छौ । मधेशको पीडा र उत्पीडनको बारेमा सबभन्दा बढी हाम्रो पार्टीले नै बोलेका हुन् । जुन बेला यी मेधशी नेताहरुको अतोपतो थिएन त्यो बेलादेखि नै हाम्रो पार्टीले मधेशका बारेमा बोलेका हुन् । मधेशका मुद्दालाई अन्तराष्ट्रिय करण गर्नुदेखि लिएर बहसको विषय बनाउने काम हाम्रै दलले गरेका हुन् आज कसैले उठाई रहेका छन् भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति छैन समर्थन छ ।
मधेशवादी दलले उठाएको मागमध्ये कुन जायज हो र कुन नजायज हो ?
–कुनै पनि माग नजायज हुँदैन तर समय सापेक्ष छ कि छैन । समग्र देश, उत्पीडित जनताको हितमा छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । सबैको हितमा छ भने त्यो जायज हो, कुनै व्यक्ति वा समूहको हितमा छ भने त्यो नजायज हो । जस्तै उनीहरुले उठाएको मागमध्ये सविधान पुनःलेखनको कुरा उचित छैन अहिलेको सन्दर्भमा । सविधान कार्यान्वयको दिशामा आगाडि बढी सकेको छ यस अवस्थामा अब पुनःलेखनको माग गर्नु जायज होइन । सविधानमा कहाँ कुन धारामा चित्त बुझेको छैन त्यसमा छलफल गरि संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यो हामीले पनि भन्दै आएको कुरा हो ।
६ महिनासम्म मधेशमा आन्दोलन हुँदा तपाईहरु क्षेत्रमा जानु भएन, अहिले गइ रहनु भएको छ, त्यहाँको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?
–मधेशको कसैको ठेक्का होइन । मधेश सबैको हो । मधेश नेपालभित्रै पर्छ । त्यहाँको पीडा, त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको मुद्दाप्रति अरु दलले जति चिन्ता गर्छन् त्यति चिन्ता हामीलाई पनि छ । हामी जनयुद्धमा हुँदा आजका ती नेताहरु कहाँ थिए, कुन घरमा थिए, कुन दलमा थिए कसैबाट लुकेको छैन । हामीले त्यो आफ्नो जिल्ला, आफ्नो क्षेत्र यो कारणले नगएको हो कि त्यहाँ मुठभेड नहोस् । कुनै प्रकारको क्षति नहोस् भनेर नगएको हो । हामीसँग पनि जनता छ, हामीसँग पनि कार्यकर्ता छ यदि चाहेको भए जान सक्थ्यो तर झडप हुन्थ्यो । झगडा हुन्थ्यो । त्यो हामी गर्न चाहेनौ, त्यति हो । त्यही दलहरुले आन्दोलन गरेका थिए, आज त्यही दलको कस्तो अवस्था छ, गाउँमा गएर बुझ्दा हुन्छ । उनीहरुले किन आन्दोलन गरे किन स्थगित गरे त्यसको हिसाब जनताले मागि रहेका छन् । त्यसको हिसाब दिन सकिरहेका छैन नेताहरु । मधेश आन्दोलनको नाममा कतिपय टुहरो भयो, अपागं भयो अहिले उनीहरुलाई हेर्ने कोही भएन । यो कुराहरुले गर्दा उनीहरुको आलोचना भइरहेको छ । त्यसैले म भन्छु, जुन उद्देश्यले उनीहरुले आन्दोलन गरे त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सकेन । मैले देखेको त्यति हो ।
मधेशको समस्या चाँडै समाधान होस् भनेर पहल गर्न तपाई आफ्ना दलका नेतालाई भन्नु भएको छ कि छैन ?
–हो, हामीले यो कुरा आफ्ना दलका नेतृत्वपंक्तिलाई भनेका छौ । एकपटक होइन पटक पटक भनको छौ । भनेका कतिपय कुरा कार्यान्वयन भएको छ कतिपय भएको छैन । आजसम्म मधेशवादी दलसँग जतिपटक वार्ता भएको छ । वा वार्ताका लागि पत्र गएको छ ती सबै हाम्रै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डका कारणले भएका हुन् । प्रचण्डले प्रयास नगरेको भए सायद मधेशवादी दलसँग वार्ताहरु हुने थिएन । मुलुक अर्कै अवस्थामा जान्थे । त्यसैले मधेशको समस्या चाँडै समाधान होस् भनि हामी भित्रैदेखि चाहेका छौ ।
समाधानको सुत्र के हो तपाईसँग ?
–एउटै सुत्र हो, आफ्नो गोरुको बाह्रैटाका भन्न छाड्नु पर्छ । चाहे सरकार पक्ष होस् वा आन्दोलनकारी पक्ष होस् । आआफ्नै अडानमा बसि रह्यो भने समस्या कहिले समाधान हुँदैन ।